Sawirka Sawirka: La kulan Minneapolis
Sawirka Sawirka: Tim Humphill
Tim Hemphill, oo ah beeraleyda hadhuudhka ah iyo lowska Iowa, waxay kiraystaan qayb ka mid ah dalkiisa shirkad muraayadaha dabaysha ku rakibtay, isagoo intaa raaciyay $ 20,000 sanadkii dakhligiisa. Matt Grocoff ayaa ku eedeeyay qoyskiisa fiilada korontada iyada oo ku jirta gurigeeda ku dhow guriga eber-ta tamarta ee Michigan, taas oo ay ku shaqeynayaan shaashado qorraxda qorraxda. Iyada oo ay uga mahadcelinayaan 2,613 qoraxda qoraxda ee saqafka ka ah Xarunta Shirarka Minneapolis, magaaladu waxay kaydisaa lacag, hoos u dhigida kaarboonka, iyo inay soo jiidato macaamiisha qaata joogtaynta dhismaha.
Xiriir dheer oo udhaxeeya Machadka "McKnight Foundation iyo Energy Foundation" ayaa gacan ka geysanaya samaynta Midwest hoggaamiye qaran oo horumarinaya tamarta dib loo cusbooneysiin karo iyo tamarta tamarta. Tan iyo 1998-kii, McKnight wuxuu taageerey xeeladaha tamarta ee loo yaqaan 'Energy Foundation' si uu u dhiirrigeliyo dabaysha iyo qoraxda, dhismayaasha, awoodda, iyo gaadiidka ka dhigi kara mid wax ku ool ah, iyo in la dhiso taageerada cimilada iyo nidaamka tamarta nadiifka ah. Dhamaan gobollada Dhexe, dadka degan, shaqaalaha, iyo ganacsatada ayaa kaabaya faa'iidooyinka-shaqooyinka, horumarinta dhaqaalaha, kaydka macaamiisha, iyo hawada iyo biyaha nadiifka ah.
Maanta, in ka badan 40 boqolkiiba awoodda dabaysha ee Mareykanka waxay ku taal 13 gobollada Midwest. Sida laga soo xigtay Nadiifinta Shaqooyinka Midwest, in kabadan nus malyan oo shaqaale gobolka ah ayaa shaqeeya qaybaha tamarta nadiifka ah. Iowa iyo Illinois ayaa ah labada dawladood ee ugu sareeya ee waddanka si ay u fududeeyaan shirkadaha si ay u helaan tamar la cusboonaysiin karo. Ohio kama fogaaneyso # 8.
Sawirka Sawirka: SIDA Wadashaqeyn iyo Matt Grocoff
Siyaasadaha tamarta ee hormarinta ayaa kiciyay waxayna joogteynayaan koritaanka suuqyada tamarta nadiifka ah ee Midwest iyo keenista kaydka macaamiisha. Tusaale ahaan, Guddiga Minnesota Public Utilities Commission (PUC) wuxuu ogolaaday qorshe horumarineed oo loogu talagalay Xcel Energy - adeegga ugu weyn ee gobolka iyo hoggaamiyaha awooda dabaysha - in uu ka fariisto laba dhirta dhirta waaweyn, dabayl laba gees ah iyo awoodda qorraxda, kor u qaadida tallaabooyinka waxtarka, iyo 2030, gooyaa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo boqolkiiba 60. PUC waxay sidoo kale joojisay in ay oggolaato gaaska dabiiciga ah si ay u beddesho dhuxusha iyada oo loo tixgelinayo faa'iidooyinka dhaqaale iyo faa'iidada ee dib-u-cusbooneysiinta iyo wax-ku-oolnimada, inkasta oo u doodayaashu ay sii wadaan inay wax baraan siyaasadaha kale ee ku saabsan mudnaanta go'aanka. Saddexda dawladood ee kale - Michigan, Ohio, iyo Illinois - waxay qaateen siyaasado tamar nadiif ah sannadka 2016. Siyaasadda cusub ee Illinois ayaa la filayaa inay soo saarto $ 12 illaa $ 15 bilyan oo ah maalgelin tamareed oo nadiif ah oo gobolka ka mid ah waxayna bixisaa $ 750 milyan oo ah bulshooyinka dakhliga hoose ee waxtarka, qoraxda, iyo taageero kale. Waxay sidoo kale abuuri doontaa tobanaan kun oo shaqo oo cusub.
Waad ku mahadsan tahay shabakadda deeqda maalgashiga tamarta iyo taageerada ballaaran ee horumarinta tamarta nadiifka ah - ka ganacsiga, macaamilka, caqiidada, sinnaanta, dakhliga hoose, caafimaadka, deegaanka iyo kooxaha kale - waxaan rajeyneynaa socodka sii wadi doona gobolka, iyo sidii hore, sida Dhulka Midwest waxa uu waddaa waddanka.